Xulka qaranka Kenya oo si layaab leh guul kaga gaaray Tanzania kulan ka tirsan Koobka Qarammada Afrika 2019… + SAWIRRO – Gool FM
Xulka qaranka Kenya oo si layaab leh guul kaga gaaray Tanzania kulan ka tirsan Koobka Qarammada Afrika 2019… + SAWIRRO
Dajiye June 28, 2019
(Qahira) 28 Juunyo 2019. Xulka Kenya ayaa si layaab leh guul kaga gaaray 3-2 dhiggooda Tanzania kulan ka tirsan Koobka Qarammada Afrika 2019, kaasoo ka soconaya dalka Masar, taasoo ka dhigan inay gaareen guushoodii ugu horeysay ee tartankan.
Kulankan ayaa ka tirsanaa Group C ee Koobka qarammada qaaradda Afrika 2019.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay barbaro 2-1 ah.
Daqiiqadii 6-aad Xulka qaranka Tanzania ayaa hogaanka u qabtay ciyaarta kaddib markii uu gool u dhaliyay ciyaaryahan Simon Msuwa, dheesha ayaana sidaas ku noqotay 1-0.
Laakiin wiilasha Kenya ayaa daqiiqadii 39-aad waxay heleen goolka barbaraha Michael Olunga ayaana ciyaarta ka dhigay 1-1.
Balse ku dhawaad dhamaadka qeybtii hore ee ciyaarta gaar ahaan daqiiqadii 40-aad, markale wiilasha Xulka qaranka Tanzania ayaa waxay hogaanka u qabteen ciyaarta, kaddib markii uu ciyaaryahanka lagu magacaabo Mbwana Samata uu dheesha ka dhigay 2-1.
Laakiin daqiiqadii 60-aad Johanna Omolo ayaa neefta ku soo celiyay xulkiisa qaranka Kenya, wuxuuna ciyaarta ka dhigay barbaro 2-2 ah, kaddib caawin uu ka helay saaxiibkiis Ayub Masika.
Markle daqiiqadii 80-aad wiilasha xulka qaranka Kenya ayaa waxay ciyaarta ka dhigeen 3-2, waxaana goolkan dhaliyay Michael Olunga oo caawin ka helay Eric Johana Omondi.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 3-2 ay si layaab leh ay guusha ku raacday wiilasha xulka qaranka Kenya, waxayna heleen saddeexdooda dhibacood ugu horeysay ee Group C maadaama kulankii ay tartankan kaga daah furteen laga adkaaday, halka Xulka qaranka Tanzania ay guuldaro la kulmeen 2-da kulan ay tartankan ka ciyaareen.
Xulka Brazil oo u gudbay wareega afar dhamaadka Copa America 2019, kaddib markii uu rigoorayaal ku garaacay Paraguay... + SAWIRRO